ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ အရပ်ကို စီမံကိန်း လုပ်ပြီး မသတ်ပါနဲ့ - Kanbawza Tai News
Home ဆောင်းပါး ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ အရပ်ကို စီမံကိန်း လုပ်ပြီး မသတ်ပါနဲ့
ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ အရပ်ကို စီမံကိန်း လုပ်ပြီး မသတ်ပါနဲ့
January 17, 2021 ဆောင်းပါး,
“ ဟိုးအပေါ်က တောင်တွေကို ကြည့်ပါဦး ဘယ်လောက် သာယာလိုက်သလဲ၊ ဒါပေမယ့် တောင်တွေမှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ စိတ်မကောင်းစရာပဲ။”
ဒီ စကားကို ပြောဆိုသည်မှာ အခြားသူ မဟုတ် လက်ရှိ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် တောင်ကြီးမြို့၏ အရှေ့ဘက်ရှိ တောင်တန်းကို ကြည့်၍ ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြောဆိုခဲ့သည့် အချိန်မှာ တပ်မတော်ပိုင် မီးပုံးပျံကွင်းအတွင်း တွေ့ဆုံပွဲ ပြုလုပ်ခွင့် မရသဖြင့် လမ်းဘေးတွင် ကုန်တင်ကားပေါ်၌ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ရသည့် လူထု တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဖြစ်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်၏ မြို့တော် တောင်ကြီးမြို့သည် တောင်ပေါ်မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ စိမ်းလန်းစိုပြေ အေးချမ်းသာယာသည့် မြို့တော်တစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ အင်္ဂလိပ် အစိုးရလက်ထက် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော်က အေးချမ်း သာယာလှပသည့် သည်နေရာလေးကို သဘောကျ နှစ်ခြိုက်၍ မြို့တည်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ် မတိုင်မီ တောင်ကြီးမြို့ နေရာသည် တဲအိမ် အနည်းငယ်သာ ရှိသည့် ရွာငယ်လေး တစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ် ရောက်သည့်အခါ တောင်ကြီးမြို့သည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၏ ရုံးစိုက်ရာမြို့ ဖြစ်လာသည်။ ၁၈၉၄ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရသည် ပထဝီ အနေအထားနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရင်းများကြောင့် ၎င်းတို့၏ ရုံးများကို အင်းလေးကန် အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိ မိုင်းသောက်မှ တောင်ကြီးမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ချိန်မှ စတင်ကာ တောင်ကြီးမြို့ အဖြစ် ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာသည်။
ထိုသို့ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာမှုမှာ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းကာလများတွင် ပို၍ သိသာ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ တောင်ကြီးမြို့၏ လူဦးရေ ထူထပ်သိပ်သည်းမှုကို လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် ယခင် စစ်အစိုးရခေတ်က အေးသာယာမြို့သစ်ကို တည်ထောင်ပေးခဲ့သော်လည်း အေးသာယာသည် အေးသာယာအလျောက် စည်ကားလာသကဲ့သို့ တောင်ကြီးမြို့တွင်လည်း လူဦးရေက လျော့မသွားဘဲ တိုးသည်ထက် တိုးလာခဲ့သည်။
ယင်း တိုးပွားလာသော လူဦးရေတို့အတွက် မြို့၏ အနောက်ဘက် တောင်ကုန်းတောင်စောင်းများ အပါအဝင် ချဲ့နိုင်သမျှ ချဲ့ထွင်လာရသည်။ ယခင်က တောတောင်များ ပျောက်ဆုံးကာ လူနေအိမ်များ ဖြစ်လာရသည်။
တစ်ဖန် အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရအဆက်ဆက် လက်ထက်တို့တွင် မြို့ပြအိမ်ရာစီမံကိန်းများ ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အောင်မြင်သည်များလည်း ရှိသလို လုပ်ငန်းများ မပြီးဆုံးဘဲ တစ်ပိုင်းတစ်စနှင့် ရပ်နားနေသည့် လုပ်ငန်းများလည်း ရှိနေကြသည်။ မြင်တွေ့ရသလောက် မအောင်မြင်သည်က များပေသည်။ ယင်းကဲ့သို့ စီမံကိန်းများ ဖော်ဆောင်မှုများကြောင့် မြို့ပြဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူနေမှုဘဝ တိုးတက်ရေးတို့အတွက် အထောက်အကူပြုသလို အခြား တစ်ဘက်တွင်လည်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။
လတ်တလော တောင်ကြီးမြို့တွင် ဒေသခံများအကြား ဝေဖန်မှု မြင့်တက်နေသည့် အိမ်ရာ စီမံကိန်းတစ်ခုမှာ တောင်ကြီးမြို့ တောင်ဘက်အထွက် ၂ မိုင် ထင်းရှူးတောရှိ Maw Shan Development Co,. Ltd ၏ ပန်းချယ်ရီအိမ်ရာ စီမံကိန်းပင် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပန်းချယ်ရီအိမ်ရာစီမံကိန်းကို ယခင် ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ် လက်ထက်က သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ပန်းချယ်ရီအိမ်ရာ (၂) စီမံကိန်းအတွက် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကော်မတီနှင့် မောရှမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Maw Shan Development Co,. Ltd) တို့ ဒီဇင်ဘာလ အတွင်းက ထပ်မံ၍ သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည်ဟု သိရပါသည်။
လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသည့် ပန်းချယ်ရီအိမ်ရာစီမံကိန်းသည် ဧရိယာ ၁၂၇ ဒသမ ၁၅၃ ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး တောင်ကြီးမြို့၏ ရေမြေတောတောင်နှင့် ရေဝေရေလဲတို့ကို ထိန်းသိမ်းပေးထားသည့် ထင်းရှူးပင်ပေါင်း သောင်းချီ ပေါက်ရောက်ရာ နေရာလည်းဖြစ်ကာ စီမံကိန်းအတွင်း ထင်းရှူးပင်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော် ခုတ်ယူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။
ယင်းပန်းချယ်ရီအိမ်ရာစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်ကြီးမြို့ခံ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများက စုပေါင်း လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် အပါအဝင် တာဝန်ရှိသူများထံသို့ ကန့်ကွက်စာ ပေးပို့ ထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
“အိမ်ရာစီမံကိန်းတွေကို ပီပီပြင်ပြင် ဖော်ဆောင်တဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်တို့က ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလို လုပ်တိုင်းမှာ သစ်တောကို မထိခိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ၁၉၇၀-၁၉၈၀ လောက်က တောင်ကြီးမှာ ရေထွက်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ အဲဒီရေထွက်တွေ တော်တော်များများက ရေလုံးဝ ခန်းသွားတာတွေ ရှိပါတယ်” ဟု ကန့်ကွက်စာ လက်မှတ်ရေးထိုး တင်ပြထားသူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးတင်ထွန်းအောင်က ပြောသည်။
ပန်းချယ်ရီအိမ်ရာ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံများက ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းမှာ ယခု တစ်ကြိမ်သည် ပထမဆုံးတော့ မဟုတ်ချေ။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်းကလည်း တောင်ကြီးမြို့တွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်တော်မူကြသော နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယ ဆရာတော်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင် ဆရာတော်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်/ မြို့နယ်အဆင့် ဆရာတော်ကြီးများ ဦးဆောင်၍ ယင်းစီမံကိန်း မြေနေရာသည် မြို့လူထု၏ ရေအရင်းအမြစ် နေရာဖြစ်သည့်အတွက် ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ထံသို့ မေတ္တာရပ်ခံစာ ပေးပို့ခဲ့ဖူးသည်။
စီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်သူမှာ ရဟန်း ရှင်လူ ပြည်သူအများက ကန့်ကွက်နေကြခြင်း ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည် ဖော်ရန် ရှေ့တိုး ဆောင်ရွက်နေသည့် မောရှမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Maw Shan Development Co,. Ltd) နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၏ သဘောထားနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ အံ့ဩဖွယ်ရာ ဖြစ်နေပေသည်။
“ အိမ်ရာစီမံကိန်းဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကောင်းပါတယ်။ ခုလက်ရှိ တောင်ကြီးမှာ လုပ်နေတဲ့ စီမံကိန်း အများစုက လူထုအတွက် ဖြစ်ရဲ့လား ကြည့်ရမယ်၊ သာမန်ပြည်သူတွေ မနေနိုင်၊ မဝယ်နိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ လုပ်နေကြတာပါ။ လူတစ်စုအတွက်ပဲ အကျိုး ဖြစ်စေမှာပါ။ မြို့ခံလူထုအတွက်၊ အထူးသဖြင့် သာမန် အခြေခံ လူတန်းစား ပြည်သူအတွက် လုံးဝကို အကျိုး မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဒီထင်းရှူးတောက တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အသက်ပါ၊ ဒီထင်းရှူးတော မရှိတော့ရင် တောင်ကြီးမြို့အတွက်က ရင်လေးစရာပါပဲ။”ဟု တောင်ကြီးဒေသခံ အသက် ၇၀ ကျော်အရွယ် ဆရာဝန်တစ်ဦးက မှတ်ချက်ပြုသည်။
ပညာရှင်များ၏ အဆိုအရ တောင်ကြီးမြို့၏ သဘာဝ ရေအရင်းအမြစ်သစ် မြို့၏တောင်ဘက်ရှိ အဆိုပါ ထင်းရှူးတော အပါအဝင်ဖြစ်သော သစ်ပင်သစ်တောကြီးများ ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိထားရသည်။ ရှေးလူကြီး အချို့ကမူ တောင်ကြီးမြို့သည် နောင်တစ်ချိန်တွင် သောက်သုံးရေကြောင့်ပင်လျှင် ပျက်စီးရနိုင်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ဖူးသည်။
တောင်ကြီးမြို့သည် မြစ်ချောင်း၊ အင်းအိုင်များနှင့် ဝေးကွာသည့် တောင်ပေါ်မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ရှိနှင့်ပြီး မြေအောက်ရေ အရင်းအမြစ်များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြရန် လိုပါသည်။ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် သဘာဝသစ်ပင် ဝါးပင်ကြီးများ လျော့ပါးလာမှု၊ အဝီစိတွင်းများဖြင့် မြေအောက်ရေကို အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူ သုံးစွဲမှု၊ နေအိမ်ဝိုင်းများအတွင်း မျက်နှာစာအပြည့် အင်္ဂတေ ခင်းကျင်းမှု စသည့် စသည့် အကြောင်းများကြောင့် မြို့ တော်တောင်ကြီးတွင် မြေအောက်ရေများ လျော့နည်းလာနေရသည်။ ရှေးယခင်က တောင်ကြီးမြို့သူ မြို့သားများ အားကိုးအားထား ပြုခဲ့ရသော စိမ့်စမ်းရေထွက်များ အတော်များများ တိမ်ကောပပျောက်လာနေရသည်။
“ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်” ဟူသော စကားလုံးကို နေရာ အတော်များများတွင် တွေ့မြင်ရသည်။ စကားလုံးသည်လည်း အားတက်ဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော ခရီးဆောင်မြန်မာအဘိဓာန်တွင် ဖွံ့ဖြိုး (နာမဝိသေသန) - စည်ပင် တိုးပွားသော၊ ပြည့်ဖြိုးသော၊ တိုးတက် (ကြိယာ) - ပွားများလာသည် ဟု အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားသည်။ စကားလုံး ၂ လုံးကို ဆက်၍ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုရသော စည်ပင်တိုးပွား ပွားများလာသည်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ အနေအထား တစ်ခုမှ ပိုမို ကောင်းမွန်သော အနေအထား တစ်ခုဆီသို့ ပြောင်းလဲခြင်းဟုလည်း ဆိုနိုင် ပါသည်။ သို့ရာတွင် လောက၏ နိယာမအတိုင်း အကောင်းရှိလျှင် အဆိုးလည်း ရှိတတ်သည်ကို သတိပြုရမည် ဖြစ်သည်။
ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုတွင်လည်း နည်းစနစ် မကျသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာ ရှိသည်ကို သတိချပ်ရမည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ အများအပြား၏ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှု ပုံစံကို ကြည့်လျှင် ယင်းအချက်ကို ကောင်းစွာ တွေ့မြင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ခေါင်းစဉ်၏အောက်တွင် သဘာဝ တောတောင်ရေမြေ၊ သစ်ပင် သစ်တောများ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးကြရသည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း မိုးခေါင် ရေရှားမှု၊ ရေကြီးရေလျှံမှု၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်မှု စသည့် သဘာဝက ပေးသည့် ဒဏ်ကို လူသားများပင် တစ်ဖန်ပြန်၍ ခံစားနေကြရ သည်မှာ အားလုံးအသိပင် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ပြများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပုံစံများသည်လည်း ယင်းလမ်းစဉ် အတိုင်း လိုက်ပါနေသည်ကို စိတ်မကောင်းဖွယ် တွေ့မြင်ရသည်။
ယင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေ အရပ်ရပ်ရပ်တို့ကြောင့် တောင်ကြီးဒေသခံများက ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ မြို့သူမြို့သားများ ကန့်ကွက်ကြခြင်းမှာ အိမ်ရာစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်ခြင်းထက် စီမံကိန်းမြေနေရာ အတွင်း ပါဝင်နေသည့် ထင်းရှူးပင် အပါအဝင် အခြား သစ်တောသစ်ပင်များ ခုတ်လှဲ ရှင်းလင်းမည့်အရေးကို ကန့်ကွက်နေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့်လည်း လူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည့် လူထုအစိုးရ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ တောင်ကြီးမြို့တွင် ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း များနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်ကြီးသားများ၏ သဘောထားအမြင်ကို ရယူဆုံးဖြတ် သင့်ပါသည်။ တောင်ကြီးသားတို့၏ နှလုံးသားကို ဝင်၍ ခံစား ကြည့်စေချင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပွင့်လင်း မြင်သာမှု မရှိသော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကြောင့် မြန်မာပြည် တစ်နံတစ်လျား တောတွေလည်း ပြုန်းလို့ တောင်တွေလည်း ကတုံး ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါသည်။
တောင်ကြီးမြို့ကို ၃ နှစ်အတွင်း Smart City ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်က ပြောဆိုထားဖူးသည်။ Smart City ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် အခြားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ဆောင်ရွက်နေရုံဖြင့် မရနိုင်ပါ။ စိမ်းလန်းစိုပြေ သာယာသော၊ နေချင်စဖွယ်ကောင်းသော Green City ဖြစ်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် တောင်ကြီးမြို့၏ အသက်သွေးကြော ဖြစ်သော ရေဝေရေလဲ သစ်တောများ မပြုန်းတီးရေး၊ တောင်ကြီးမြို့၏ အလှတရား၊ ရှမ်းပြည်နယ်၏ အလှတရားဖြစ်သော ထင်းရှူးပင်များ၊ ချယ်ရီပင်များ ဆက်လက် ရှင်သန်ခွင့် ရရှိရေးမှာလည်း လွန်စွာမှ အရေးကြီးပါသည်။
‌တောင်ကြီးမြို့၏ အရှေ့ဘက်တောင်ကြော အပါအဝင် မြို့ပေါ်နေရာ အတော်များများတွင် ရှေးယခင်က ချယ်ရီပန်း ပွင့်ချိန်ဆိုလျှင် တစ်မြို့လုံး ပန်းရောင် လွှမ်းခဲ့ဖူးသော်လည်း ယခုတွင်မူကား အရှေ့ဘက် တောင်ကြောပေါ်တွင် ချယ်ရီပင် ဟူ၍ မတွေ့ရသလောက် ဖြစ်လာသည်။ ထိန်းသိမ်းမှု ကင်းမဲ့၍ ခုတ်ချင်တိုင်း ခုတ်၊ ပြန်လည် စိုက်ပျိုးမှု မရှိပါက နောင်အနာဂတ် လူဖြစ်လာမည့် တောင်ကြီးသား လူငယ် မျိုးဆက်သစ်များကို ချယ်ရီပင်၊ ထင်းရှူးပင်ဆိုသည်မှာ အရုပ်ရေးပြရမည့် အနေအထား သို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်သည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ဟု ဆိုလျှင်၊ တောင်ကြီးမြို့ဟု ဆိုလျှင် ချယ်ရီနှင့် ထင်းရှူးကို အားလုံးက အလိုလို တွဲမြင်ကြပါ သည်။ ခေတ်အဆက်ဆက် စာဆိုတော်ကြီးများကလည်း ရှမ်းတောင်တန်း၏အလှကို သရုပ်ဖော်ကြရာတွင် ချယ်ရီနှင့် ထင်းရှူးသည် မပါမဖြစ် အဓိက ဇာတ်ဆောင်ကြီးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှု ကင်းမဲ့ပါက နောင်အနာဂတ်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်၌ ထင်းရှူးနှင့် ချယ်ရီပင်များ မျိုးသုဉ်း ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ချယ်ရီနှင့် ထင်းရှူးအပါအဝင် မည်သည့် တောတောင်ရေမြေ၊ သစ်ပင်သစ်တော မျှ ဆုံးရှုံးရမည်ကို တောင်ပေါ်သားတို့ မလိုလားပါ။
တောင်ကြီးသားများ၊ ရှမ်းပြည်သားများသည် ချယ်ရီနှင့် ထင်းရှူးပင်များကို လိုလားပါသည်။ မိမိတို့ မြိုရွာ ဒေသ ရေရှည်အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် တောတောင်ရေမြေများ လိုအပ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ချယ်ရီနှင့် ထင်းရှူးအပါအဝင် မည်သည့် တောတောင်ရေမြေ၊ သစ်ပင်သစ်တော မျှ ဆုံးရှုံးရမည်ကို တောင်ပေါ်သားတို့ မလိုလားပါ။
အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများကို တောင်ပေါ်သူ တောင်ပေါ်သားများ၊ ရှမ်းပြည်သူ ရှမ်းပြည်သားများ၊ တောင်ကြီးသူ တောင်ကြီးသားများအားလုံး မလိုလားပါကြောင်းနှင့် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်နဲ့ တောင်တွေရှိရာ အရပ်ဖြစ်တဲ့ တောင်ကြီးမြို့ကို စီမံကိန်းတွေ လုပ်ပြီး သေအောင် မသတ်ပါနဲ့လို့ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မယ့် မောရှမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများ အားလုံးကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ရပါသည်။ ။